तरकारी राष्ट्रवाद | रुपान्तरण
२२ असार २०७६, आईतवार १६:२५
नायकहरु कसरी नालायक हुन्छन् ?
आज एउटै सन्दर्भमा रहेर उत्तर खोज्न प्रयास गर्छु ।
नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरुबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी एवम् फलफूलजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी परीक्षणपछि मात्र आयात गर्ने विषयमा गत जेठ १० गतेको मन्त्रीपरिषद् वैठकमा गरेको निर्णय सबैलाई जानकारी नै होला । जनस्वास्थ्यका लागि नेपाल सरकारले यो दूरगामी निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यन्वयनमा जाँदा केही असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । केही दिन बजारमा समस्या आइपर्छन भन्ने हामीलाई थाहा थियो । हामीले हिजोको कस्तै संकटको सामना गरेकै हौं र यो संकटको पनि हामी डटेर सामना गर्दछौं । केही थान वीषका व्यापारी र केही बिदेशी कर्मचारी रोइकराई गर्दैमा नेपाल सरकार नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दैन र गर्न दिंदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
केही दिन बिदेशी तरकारी नखाएर कोही नेपाली मर्दैनन् । हामी हाम्रा जनतालाई निरन्तर वीष सेवन गराउनुभन्दा केही संकट झेलेरै भविश्यमा स्वस्थ तरकारी तथा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सचेत र सावधान छौं । यसका लागि तरकारी हुने र नहुने घरबीच केही दिन बरु ऐंचोपैंचो गरौं, केही दिन मिठो मसिनोको स्थानमा नमिठो र खस्रो नै खाऔं । स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा सबैले सहयोग र हातेमालो गरौं । कुँडार र करेसाबारी व्यवस्थापन गरौं । केही सप्ताह घरघरमा तरकारी उपयोगमा सकेसम्म कटौती गरौं । केही दिन गुन्द्रुक खाऔं, सिन्की खाऔं, तामाको तरकारी खाऔं । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरौं । नेपाल सरकार तदारुकताका साथ विषादी परीक्षण र व्यवस्थापन अभियानमा लागेको छ । केही दिनमा नै हामी हाम्रो लक्ष्यमा सफल हुन्छौं भनेर म नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
जनताको अपेक्षा थियो देशका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै भनाइ आउनेछ । प्रधानमन्त्रीले जनताको हितमा आफ्नो निर्णयको डटेर प्रतिरक्षा गर्नेछन र कस्तै दबाव पनि थेग्छन वा थेग्न उत्प्रेरित गर्छन भन्ने अपेक्षा थियो । किनकि, देशको नायकबाट यस्तै अपेक्षा त गरिन्छ ।
तर दुर्भाग्य !
मन्त्रीपरिषद् वैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै विषादी जाँच नगर्ने ठाडो प्रस्ताव पेश गरे र सबैले समवेत स्वरमा प्रस्ताव पारित भएको घोषणा आयो । र, तल्लो तहसम्म लिखित निर्णय ‘सर्कुलर’ नै नभई वीष बोकेर सीमामा पंक्तिवद्ध भारतीय सवारीसाधन ‘बीर गान’ गाउँदै नेपाल भित्रन थाले ।
हे दैव ! के लाग्छ ?
कर्मचारी र कार्यालयको बहानामा सरकारको जनहितकारी कार्यक्रममा कालो पोतियो । सामान्य कर्मचारीको रुपमा रहने राजदूतले नेपाल सरकारलाई नै चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्न थाले, छिमेकी देशले दवावको पुल बाँध्यो र भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्ववत् निर्णयबाट नेपाल सरकार लाचार, निरीह र निरुपाय भएर पछि हट्यो । कुरा त यत्ति नै हो । तर नायकको पहिचान कि संकटको घडीमा हुन्छ कि सुविधाको अवस्थामा हुन्छ भन्ने भनाई यदि सार्वभौम हो भने हामीले हाम्रा नायकबाट नालायकीको नजीर प्राप्त गरेका छौं । त्यो आफू सबल र सक्षम नभईकन निर्णय गर्ने रुपमा लिंदा पनि हुन्छ । वा, त्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा उभिन नसक्ने दुर्बल पात्रको रुपमा लिंदा पनि हुन्छ ।
कालखण्डमा नायक हुने अवसर सबैले सधैं प्राप्त गर्दैनन् । जसले प्राप्त गर्छ त्यसलाई उपयोग नगर्ने वा गर्न नसक्नेलाई नायक मानिदैन वा मान्न सकिंदैन । आमजनताको चासो र सरोकारको मुद्दामा निहुरीमुन्टी लगाउने लाचार र निरीह पात्र कसरी नायक हुन्छ ? हुँदैन । ठ्याम्मै हुँदेन ।
सरकारलाई थाहा छ, नेपाली बजारमा भित्रिएका भारतीय तरकारी तथा फलफूलसँगै वीषको व्यापार पनि चुलिएकोछ । सरकारलाई थाहा छ, नेपाली बजारको झण्डै आधा हिस्सा (४० प्रतिशत) त्यस्तै विषादियुक्त तरकारी र फलफूल भारतबाट आयात हुन्छ । सरकारलाई थाहा छ, विषादी परीक्षण कुनै पनि शर्तमा आवश्यक छ । त्यसको क्रियान्वयनले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन अनुकूल नतिजा प्रदान गर्छ । सरकारलाई यो पनि थाहा छ, हामीले आफ्नो आन्तरिक बजार प्रणाली बलियो बनाउन र स्थानीय किसानलाई बजारमा स्थान दिन पनि विषादि परीक्षण अनिवार्य छ । सरकारलाई थाहा छ, झण्डै ५० अर्बको हाराहारीमा तरकारी र फलफूलसँगै भारत नेपालमा वीष पनि निर्यात गरिरहेको छ । सरकारलाई थाहा छ, यो वीष अनेक रोगहरुको आयात पनि हो, ठूलो मूल्यका ओषतीहरुको पनि आयात हो ।
तर, सरकारलाई थाहा हुनु र सरकार लाचार हुनुबीच आकाश र जमीनको अन्तर छ । बलियो भनिएको सरकार एउटा सामान्य सन्दर्भमा पनि कसरी विदेशी दवावको सामना गर्न सक्दैन भन्ने अर्को बलियो दृष्टान्त दिएर सरकारले जनताको मर्ममाथि खेल्यो । यहींनेर नायकहरुको नालायकी छताछुल्ल पोखियो ।
“तिमीहरु वीष खाए खाओ, नखाए नखाओ म चाँहि मेरो सरकारको निर्णयलाई ‘लालसलाम’ गर्छु भनेर कुनै नायकले भन्छ ?
पत्याउँदैनथें । तर, भन्दारहेछन् ।
ल ठीक छ, क्वारेन्टाइनका लागि उपकरण र जनशक्ति तत्कालका लागि अभाव भयो । उन्नत प्रयोगशाला चाहिने रहेछ भन्ने पनि मानियो र बुझियो । तयारी कम थियो । त्यसैको फाइदा छिमेकीले उठायो । त्यो पनि सही । भारतीय व्यापारीको हितमा भारत सरकारले चासो देखायो, त्यो ठूलो कुरो भएन । विषादि जाँच केन्द्रका लागि तत्काल काम शुरु हुन्छ भन्ने पनि पत्याइयो । तर राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारले समयसीमा तोकेर काम गराउन सक्दैन ? समयसीमाको घोषणा गर्न सक्दैन ? भदौ १ देखि यो यो सीमा नाकाबाट वीष छरिएका तरकारी र फलफूल आयात हुँदैन भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन पर्दैन ? विषादि परीक्षणका लागि यति दिनभित्र यो ठाउँबाट यो किसिमको प्रविधि ल्याएर हामी देखाइदिन्छौ भन्ने हुत्ती सरकारसँग छैन ? परराष्ट्रको ढोको नाघेर सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध चलखेल गर्ने राजदूत नामको कर्मचारीलाई नसिहत दिन सक्दैन ? जनताका नायकले भारतका व्यापारीलाई घाटा लाग्ने भयो र उनीहरुको तरकारी कुहिने भयो भनेर ‘त्वम् शरणम्’ गर्दिने ? यो त नायकले देखाएको नालायकी मात्र हो ।
सीमा नाकामा भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि केही मनुवामा राष्ट्रवादको चर्को पीर देखियो । दुतावासकै नून हालेर तरकारी पकाउने घाघडानका बुद्धिजीविले पनि दशाक्षरी ट्विट गरेर सरकारी निर्णयको विरोध गरे । उनीहरुमा पलाएको तरकारी राष्ट्रवाद अव्दितीय थियो । सरकारी घटककै केहीलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निशाना साँध्न हतियार प्राप्त भयो । उनीहरुले जनताको स्वाथ्यमा चासो दिएर वा स्थानीय किसानको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएनन । प्रतिपक्षमा दर्ता भएको दलले सबै कुरा सकिएपछि पाँच बुँदाको विज्ञप्ती जारी गरेर ‘यो भएन त्यो भएन’ मात्र भन्यो । राष्ट्रवादको चरित्र तरकारीसँगै उम्रिएर तरकारीसँगै कुहियो । यस्तो पनि हुन्छ ?
जुनबेला नेपाल नाकाबन्दीको चपेटामा थियो त्यो बेला लेखिएको ‘कस्मेटिक राष्ट्रवाद’को विषयमा मलाई धेरै अग्रजहरुले सचेत गराए । ज्यादै रुढ र ज्यादै रुखो नहुन सिकाए । यो पाली तरकारी राष्ट्रवाद बोकेर केही नेता र जनप्रतिनिधि उछलकुद गरिरहँदा मलाई त्यो सन्दर्भ याद आयो । अर्गानिक राष्ट्रवादको क्यानभासमा छरपस्ट भएको तरकारी राष्ट्रवाद देखेर म हाँसे । माधवकुमार नेपालको भाषण सुनेर हाँसें । बाबुराम भट्टराईको ट्विट पढेर हाँसे । नेकपाकै केही नेताले संसदीय दलको वैठकमा गरेको राष्ट्रवादको व्याख्याले हाँसे । प्रतिपक्षको विज्ञप्तिमा पनि हाँसे । तरकारी राष्ट्रवादमा हिजो माखो नमारेका ती सबै हिजो कुनै न कुनैबेला सत्ताकै प्रमुख वा मुख्य अंग थिए भन्ने बिर्सिएको देखेर हाँसें । संविधानले नै नायकहरुको नालायकीमा हाँस्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यसैले म हाँसे ।